Khilaafka Khaliijka oo gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya (Muxuu qabaa dastuurka?) - Caasimada Online
Home Warar Khilaafka Khaliijka oo gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya (Muxuu qabaa dastuurka?)
Khilaafka Khaliijka oo gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya (Muxuu qabaa dastuurka?)
Inkasta oo laga yaabo in markii horeba xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar uu ahaa mid ul booc ah ku kutubayay, haddana murankan ka dhashay arrimaha khaliijka ayaa u muuqda in uu wax wayn u dhimayo rajo kasta oo laga qabay in xaaladda soo hagaagto.
Galmudug oo gilgilanaysa
Qormadan tii ka horeysay ee ay BBC-da ka qortay arrintan ayaa waxa ay ku sheegnay in ay jirto saansaan ah in muranka laga yaabo in uu u talaabo baarlamaanka,
Arrintaas ayaa hadda si rami ah u dhacday kadib markii xildhibaano ay mooshin ka gudbiyeen Safiirka imaaraatka carabta ee Soomaaliya u jooga, oo ay ku eedeeyeen in uu farogalinayo arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Xildhibaanada mooshinka gudbiyay waxay safiirka UAE ku eedeeyeen inuu dawladda u gacan dhaafayo arrimaha maamul goboleedyada.
Xildhibaanadan ayaa sidoo kale ka dalbaday dawladda Isutaga Imaaraadka Carabta in ay ixtiraamto madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah kuwa mooshinka gudbiyay ayaa sheegay: “waxaan diidannahay falal aanu u aragnay in ay dastuurka ka soo horjeedaan”.
“Falalka uu ku dhaqmo safiirka Imaaraatka ee dalka ayaa ka soo horjeednaa. Ma ogin in dowladdiisu ku ogtahay iyo inkale. Waxaanu doonaynaa in xiriirka la hagaajiyo”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye.
”Waxaan ku wada jirnaa isku urur, midka Jaamacadda Carabtan, kan Islaamkan, iyo midka Qaramada Midoobey baan ku wada jirnaa. Marka waa in ay noola dhaqanto qaab dowladeed, ee aysan noola dhaqmin sida qabaa’il iska firirsan oo aan dowlad dhexe lahayn”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye oo BBC-da la hadlay.
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa la sheegaa in Soomaaliya ay saldhigyo ku leedahay iyo in maamul goboleedyada Soomaaliya u gacan dhaafeyso dowladda dhexe, sida ay xildhinaabada Soomaaliya ku eedeeyeen.
”Saldhigyo aynaan ogeyn iyo ciidamo ay iska qortaan oo aynaan ogayn iyo shacabka oo ay toos ula xiriirto ayaan ku eedeyneynaa”, ayaa lagu qoray mooshinka baarlamaanka loo gudbiyay.
Mooshinka kuma saabsana Imaaraatka oo kaliya, ee sidoo kale waxa uu xusayaa dowladdo kale oo la sheegay in ay iyaguna farogalin ku hayaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya, wuxuuna mooshinka ku baaqayaa in loola dhaqmo si la mid ah Imaaraatka. Hase yeeshee lama xusin dowladahaas kale.
Waxaa xusid mudan in mooshinka ay hormuud ka yihiin xildhibaano horey dowladda ugu eedeeyey in ay Itoobiya ku wareejisay muwaadin Soomaaliyeed, arrintaas oo markii dambe loo saaray guddi soo baara.
Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shalay ka hadlay magaalada Kismaayo ayaa nasiib darro ku tilmaamay isqabqabsiga dalka ka jira.
Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay labada hogaamiye ee aan ka hadlin moowqifkooda ku aadan khilaafka Khaliijka iyo go’aanka dhowladda dhexe.
”Khilaafka ma lahan hormar, waxaana loo baahanyahay in Soomaalida ay is ixtiraamto, ama heer federaal ha noqoto ama heer maamul goboleed ha noqoto, qadarin iyo wadatashi ayaa lagu gaari karaa horumar” ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam oo farta ku fiiqay in loo baahanyahay in dastuurka la soxo haddii ay jiraan qodobo aan kala caddayn.
”Waxaan rabnaa in aan magaalada Kismaayo dhigno gogol, taas oo ay marka hore isugu imanayaan madaxda maamul goboleedyada, oo aan ka wada hadalno, muxuu yahay doorka aan leenahay, ka wada hadalno siyaasadda arrimaha dibada yaa xaq u leh, maxaan anaga xaq u leenahay, kadibna aan madaxda dowladda dhexe la fariisanno oo aan wax isla meel dhigno” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Wuxuu sheegay in qodobada 54-aad iyo 53-aad ee dastuurka Soomaaliya in ay iska hor imaanayaan.
Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada
Isfaham darada mararka qaar soo kala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo dheer.
Markii ugu dambeysay ee Puntland ay go’aan mid kaa la mid ah qaadatana waxa ay ahayd 31-dii bishii Luuliyo, 2014-kii, xilligaas oo uu khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynihii hore, Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka Puntland. Murankaas oo markii dambe xal laga gaaray.
Madaxweynihii dhawaanta xilka laga qaaday ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo wali ku adkaysanaya in uu yahay madaxweyne ayaa hoggaanka dowladda federaalka ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen in isaga xilka laga qaado.
26-dii May ee sanadkan 2017-ka, maamul goboleedka Jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeysay heshiis xagga badda ah oo shirkado kalluumeysi lagu siiyay shatiyo.
”Sida ku cad Distuurka Federaalka ah qodobkiisa 54-Aad Awoowdaha dowladda Federaalka ah waa: difaaca Qaranka, Jinsiyadda, Xiriirka dibadda, wixii intaa ka soo hara sida Dastuurka Federaalka ahba uu qeexayo, way u madax bannaanyihiin dowlad goboleedyadu in ay aayahooda ka tashadaan, Xeerkaana waa mid loo baahnaa in Puntland lagu war-galiyo” ayuu yiri Wasiiru dowlaha wasaaradda Warfaafinta iyo Isgaarsiinta Puntland Cabdifitaax Nuur Axmed (Ashkir) oo Bishii June ee sanadkan warbaahinta kula hadlay Garowe.
Hadaba, halkuu ku dhammaan doonaa khilaafka soo kala dhex galay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya?
W/Q: Cabdinaasir Saxansoxo